watchOS 5 haizoenderana nechizvarwa chekutanga Apple Watch | Ndinobva mac
Imwe yezvinyorwa zvitsva yakatiunzira WWDC hurukuro yakakosha yakaitwa zuro masikati munguva yeSpanish, tinoiwana mune inotevera vhezheni yeWOSOS 5, hazvizoenderane nechizvarwa chekutanga Apple WatchNenzira iyi, tinogona kuona kuti chishandiso ichi chinoramba sei chisina rutsigiro rwepamutemo makore matatu tasvika pamusika.
Mumakore matatu aya, zvinoonekwa kuti tekinoroji yafambira mberi zvakanyanya, zvirinani muzvipfeko, izvo zvakamanikidza Apple kuendesa neyekutanga chizvarwa modhi kana zvasvika pakubvumidza iyo kuti ivandudzwe kune inotevera vhezheni yeWOSOS, vhezheni ichave iri nhamba yechishanu uye sezvataona mune yakakosha Apple inotarisa zvakare pamitambo, mitambo uye mitambo.
Kana iwe wakave nemukana wekutevera hurukuro yekuratidzira, payakange iri nguva yeOSOSOS, kambani yanga ichitaura nezve zvese mabasa aanotipa kana zvasvika pakuongorora chiitiko chedu, kunyange Yoga, nyowani kurovedza muviri / mutambo izvo zvinonyanya kurova. Uye zvakare, neWatchOS 5, isu tichakwanisa kudyidzana neApple Watch apo iko kwekushandisa iko kuita basa rayo.
Dai iwe uri mumwe wevashandisi vakatenga yegoridhe edition, yeavo anodhura anodarika $ 15.000, iwe unofanirwa kuziva kuti kunyangwe yako Apple Watch yakagadzirwa negoridhe, haizokwanisi kumutsidzira kune yechishanu vhezheni yeWOSOS kana.
Ini ndinopokana zvakanyanya kuti mamodheru akagadzirwa negoridhe uye akamuka goridhe ndaive nezvakawanda zvekubuda mumusika kunyanya nekuda kwerudzi urwu rwekusakara, kubvira uchishandisa madhora zviuru gumi nezvishanu pa wachi kuitira kuti mushure memakore matatu, inopera rutsigiro rwakachengeteka urwo vasingatendwe nevaridzi varo, kunyangwe vaine marii, nekuti kune iyo mari ivo angadai akatenga Omega kana chero imwe tsika yechinyakare ine hupenyu hwakareba zvakanyanya sezvo zvisingatsamire pasoftware kuti ishande.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Noticias » watchOS 5 haizoenderane neyekutanga chizvarwa Apple Watch
Manuel Alvarez Diaz akadaro
Zvakanyanya kushata kubva kuApple. Iri ndiro divi rakaipisisa rekambani iyi. Kana iwe uchinzwa senge icho, chinosiya zvinyakare zvishandiso zvinoshanda zvakakwana uye izvo zvakatora nguva yakawanda. Iwe haugone kuita chero chinhu nezvazvo? Ko kushaya zvekuita.
Pindura kuna Manuel Alvarez Díaz
Aya ndiwo Mac anowirirana neMacOS Mojave